🥇 Ukubalwa kwezimali ngomhlangano wokusebenzela wokuthunga
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 218
Ividiyo yokubalwa kwemali yokusebenzela yokuthunga
Oda ukubalwa kwezimali ngomsebenzi wokuthunga
Isoftware yethu yokubala imali yokusebenzela ikusiza ukuthi usebenze ukuphathwa kwazo zonke izinqubo enkampanini yakho. Ngosizo lwayo, ungaqapha izimpahla kusukela ngesikhathi sokuthenga okokusebenza kuze kube ngumzuzu wokuthengisela iklayenti nokuthola imali, ulawule izinkokhelo kuzo zonke izindawo futhi ubheke umsebenzi wabasebenzi egatsheni ngalinye nasendaweni ngayinye. Uhlelo lwe-accounting workshop yokuthunga lusetshenziswa ngama-workshops wokuthunga ukukhulisa inzuzo ngokubala ngokuphelele izindleko nokugcina isikhathi esinqunyelwe se-oda, ukuthenga kanye nezinkokhelo zebhange zibe zincane. Nge-accounting system yomhlangano wokuthunga, ungahlaziya ukusebenza kweworkshop yakho yokuthunga bese uthola ubuthakathaka kuyo ukuze kuqedwe ngokulandelayo. Laba kungaba ngabakhokhi abangathembekile, ababolekisi kanye nabahlinzeki, kanye nabasebenzi abadinga ukuqeqeshwa, njalonjalo.
Ngenxa yesicelo esinjalo, ungabona ubukhona noma ukungabi bikho kwenkampani futhi ubala masinyane ukusebenza kahle komnyango ngamunye. Uhlelo lwe-accounting lweshabhu lokuthunga likuvumela ukuthi ubale imali engenayo yayo yonke inkampani kanye negatsha ngalinye, umnyango kanye nomsebenzi, ukukhomba inzuzo, nokubala izindleko, izindleko nezintela. Lo ngumsizi ophelele ohlanganisa yonke imininingwane yolwazi yezimpahla, amakhasimende nezimali ngasikhathi sinye, ongaphatha ngayo konke ngasikhathi sinye. Ukusebenza kwethu kwe-accounting workshop yokuthunga kungasebenza ngaphandle komthungo nezinye izinhlelo zomsebenzi. Usebenzisa isoftware, uchitha isikhathi esincane kakhulu ukuphatha izimpahla ezikhona futhi unesikhathi esithe xaxa sokuphumula, kanye nokwenza nokwakha amaphrojekthi amasha. Ukukhetha uhlelo lwe-accounting kumhlangano wokusebenzela wokuthunga ovela e-USU Company, uthola uhlelo lokusebenza oluphelele lwebhizinisi lakho ngesibonisi esilula futhi enembile Kuyasiza ukwenza lula inqubo yokuphatha izindaba zenkampani.
Siyaqonda ukuthi kunzima kanjani kosomabhizinisi ukulawula ngokuphelele ibhizinisi, ukuqapha yonke iminyango nakho konke ukuthengwa nokuthengiswayo, ngakho-ke sikunikeza uhlelo lwesimanje lokuphatha inkampani yakho. Akudingeki uhlale phansi uthole konke izinsuku; ohlelweni lokubalwa kwezimali lokusebenzela lokuthunga ungaluthola ngamahora ambalwa. Abasebenzi bethu bazokusiza ngalokhu. Kukhona izinto zokubonisa nezokuqeqesha ezikhethekile - isethulo nevidiyo. Konke kuchazwe kubo ngendlela eningiliziwe futhi efinyelelekayo. Konke ukuhamba komsebenzi kuhlelo lokubalwa kwemali lokulawulwa kweworkshop kuhlelwe ngezigaba, okwenza kube lula ukufinyelela kulwazi oludingekayo, kunokuba ngabe ubulifuna ngengobo yomlando efanayo. Sihlala sithuthukisa isoftware, sandisa amakhono ayo futhi sithuthukisa i-interface ukwenza kube lula kuwe ukuphatha inkampani yakho. Ngemuva kokuthenga isoftware kithi, ungaxhumana nathi ngaso sonke isikhathi ngokulungiswa kwezobuchwepheshe.
Ngokulawula ukubalwa kwezimali endaweni yokusebenzela yokuthunga usebenzisa uhlelo lokubalwa kwezimali lokusebenzela, unesiqiniseko ngokulunga kwezinto ezithengiwe kanye namahora abelwe umsebenzi wokwenziwa kwempahla, futhi, ngokufanele, awesabi ukulahlekelwa yinzuzo ngenxa iphutha ekubaleni. Awudingi ukuthenga uhlelo lwe-accounting workshop yokuthunga khona manjalo. Ukuze uqiniseke ukuthi kuyasebenza, ungasebenzisa i-demo yesilingo ukuze ujwayelane nokusebenza kwayo kanye ne-interface.
Esinye sezici ezivelele zohlelo lwethu oluthuthukisiwe ukulawula okuqinile kuzo zonke izinqubo ezenzeka ebhizinisini lakho. Uma unezinkinga eziningi ekubaleni inzuzo nezindleko, khona-ke kunezindaba ezimnandi kuwe, njengoba nohlelo lungahle lwenze ukubalwa kwezimali okunembile kokungena nokuphuma kwemali. Ngakho-ke, uzokwazi ukuthi yiziphi izindleko zakho. Lokhu kukusiza ukuthi uthathe isinqumo esifanele ukuqinisekisa ukuthuthuka okuzinzile kwenkampani yakho. Ngaphezu kwalokho, isoftware yaziwa ngokunemba komsebenzi. Noma iliphi iphutha likhishiwe ngenxa yokuthi uhlelo lokubalwa kwemali lusebenza njengewashi futhi liqinisekisa ukuhleleka enhlanganweni yakho ngemuva kwezinsuku zokuqala zokusebenzisa uhlelo.
I-USU-Soft iqinisekise ukuthi wenelisekile ngombono wohlelo. Kunezindikimba eziningi futhi ungakhetha inketho engcono kakhulu yokunikeza abasebenzi bakho indawo yokusebenza engcono kakhulu. Sebenzisa leli thuba bese uzama imidwebo uma nje udinga! Lapho kunokungabaza ukuthi ngabe uhlelo lukulungele noma cha, ungazama inguqulo yethu yedemo yamahhala. Ungayisebenzisa isikhathi esilinganiselwe. Ngaphandle kwalokho, imisebenzi nayo ikhawulelwe. Kodwa-ke, inhloso yale nguqulo ukukubonisa amathuba wesoftware, ukuze ucabange ukuthi ungaluthola yini uhlelo lokusebenza noma cha. Singakuqinisekisa ukuthi le nguqulo ingaphezu kokwanele ukuyiqonda!
Ukubalwa kwezimali ngendawo yokusebenzela yokuthunga akuyona into elula. Kunezinqubo eziningi ezingenakushiywa zingalawulwa. Kodwa-ke, ibhizinisi lidinga abasebenzi abaningi ukulawula zonke lezi zinqubo. Lokhu kusho izindleko ezingeziwe kanye nokwehla kwenzuzo nokusebenza kahle. Kungakho osomabhizinisi abaningi bekhetha ukwethula i-automation emabhizinisini abo, njengoba kunezinzuzo eziningi. Okokuqala, i-automation iqinisekisa ukuthi yonke imisebenzi eyisicefe futhi ngezinye izikhathi enzima (eyenzelwe abantu) yenziwa ngendlela ezenzakalelayo ngaphandle kwamaphutha noma ukubambezeleka. Okwesibili, ungabakhulula abasebenzi bakho kule misebenzi futhi ubavumele benze okuthile okubaluleke kakhulu. Ukuthuthwa okunjalo kwezinsizakusebenza akukwazi kodwa ukuzuzisa ibhizinisi lakho futhi kulethe impumelelo yakho ezingeni elisha. Ngaphandle kwalokhu, uhlelo lwe-USU-Soft luthengwa kanye kuphela. Asidingi inkokhelo yanyanga zonke yokusebenzisa uhlelo lwethu lokusebenza. Kungakho sikhethwe yizinkampani eziningi kangaka emhlabeni wonke!